Daawo Sawirada: Sheekh Shariif iyo Axmed Madoobe oo ku kulmay Garoonka Aadan Cadde - iftineducation.com
iftineducation.com – Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho, waxaana garoonka Diyaaradaha Aadan cadde kusoo dhaweeyay masuuliyiin kala duwan.
Xildhibaano katirsan labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya iyo masuuliyiin kale uu jiro Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa kusoo dhaweeyay gudaha Garoonka Aadan Cadde.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Mdaoobe ayaa kulan kooban ku yeeshay gudaha Garoonka Aadan Cadde, waxa ayna labada masuul ka wada hadleen arimo u gaar ah iyo doorashadii dhawaan ka dhacday Muqdisho.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa magaalada Muqdisho u yimid ka qeyb galka Caleemo saarka Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo maalinta Arbacada oo Muqdisho lagu caleemo saarayo.
Daawo Muuqaal :Farmaajo oo noqday Shaqsiyaadka ugu Shacbiyada badan Caalamka iyo Al Jazeera oo soo bandhigtay